Isityholo seXiaomi Mi MIX 4 siqinisekisiwe yiarhente yaseTshayina i3C | I-Androidsis
I-Xiaomi's Mi MIX 4 iyasondela kwaye isondele: ifumene isatifikethi se3C nge5G
UXiaomi ubumba ukuba abe yinkampani elandelayo ye-smartphone ezisa iselfowuni ye-5G kwintengiso, ukuba nayiphi na enye ayilindelanga. Oku kubhalise i-terminal kunye nokuqhagamshelwa kwindawo yogcino lwedatha ye-3C e-China, ke kunokwenzeka ukuba kwiiveki okanye kwiintsuku ezimbalwa izakuvezwa ngokusesikweni yile nkampani.
Uphawu lwaseChina oluQinisekisiweyo olusisinyanzelo (i-CCC okanye i-3C njengoko isaziwa njalo kwaye isaziwa kakuhle) bubungqina obusondeleyo bokuba isixhobo siza kuvulwa kungekudala. Nabani na owamkelweyo ngeli tywina ukufutshane nokwenziwa ngokusemthethweni, kwaye, ngokubhekisele kwiXiaomi nakwiselfowuni yayo elandelayo ye-5G, I-MIX 4 -Intoni unokufika ekwindla-ngoyena ubonakala ngathi udlulile ezandleni ze-arhente yokuqinisekisa.
Uluhlu lwe-1908CC M1F3XE kutshanje luvuzile. Oku kubonisa okutshiwo: siselfowuni esinonxibelelwano lwe5G. Ikwaveza ukuba itshaja ye-'MDY-10-EX 'evunyiweyo kunye nefowuni ixhasa umthwalo ukuya kuthi ga kwii-watts ezingama-45, njengoko kunjalo ngeXiaomi Mi 9 kunye nezinye iiterminal.
Okwangoku, into esiyicebisayo kukuba ulinde ulwazi oluthile oluqinisekisa ngokungathandabuzekiyo ukuba le smartphone ikhankanyiweyo lilindelwe ixesha elide iXiaomi Mi Mix 4. Nangona kunjalo, koku, Kusemthethweni ukufumana umbono kwaye uyihambise kule mobile.
IXiaomi Mi MIX 4 iya kuba nokutshaja ngaphandle kwamacingo
Kuyatshiwo oko umenzi waseTshayina unokwazisa iMi MIX 4 njengeMi MIX 5. Ngoba? Ewe, e-China yonke into enxulumene nenombolo yesine lilishwa elibi, njengokuba inani leshumi elinantathu lisentshona, kuba "lilishwa elibi." Ke ngoko, into yokuba i-smartphone ayilandeli imeko yamanani iphezulu kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi's Mi MIX 4 iyasondela kwaye isondele: ifumene isatifikethi se3C nge5G
UMIDIGI X: Ifowuni entsha kraca isemthethweni
IHuawei isungule ifowuni yayo yokuqala ngaphandle kwe-Android kulo nyaka